DP World iyo maamulka Soomaaliland oo kala saxiixday heshiiskii balaarinta dhismaha Dekeda Berbera (Sawiro) – Radio Daljir
DP World iyo maamulka Soomaaliland oo kala saxiixday heshiiskii balaarinta dhismaha Dekeda Berbera (Sawiro)
Oktoobar 11, 2018 1:11 g 0
Magaalada Hargaisa waxaa maanta heshiis ku kala saxiixday shirkada DP world iyo maamulka lamagac baxay Soomaaliland ee sheegta in Soomaaliya inteeda kale uu ka go,ay .
Heshiiskan ayaa ahaa bilowga balaarinta dhismaha dekeda Ber bera oo 2sano kahor Soomalailand ay la saxiixatay Shirkada DP World .
Heshiiskan ayaa dhanka Soomalailand waxaa u saxiixay Madaxweynaha maamulkaasi Muuse Biixi Cabdi ,halka Shirkada DP Worldna uu saxiixay Suldaan Axmed Binu Saleebaan oo ah gudoomiyaha guud ee Shirkada DP World.
Madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi oo Qudbad ka jeediyay munaasibada ayaa sheegay in maanta Soomaaliland ay utahay maalin thaariihi ah ,Dekeda Berberana ay tusaale unoqon doonto tartanka ka socoda geeska Afrika.
Muuse Biixi ayaa dowladda Fadaraalka Soomalaiya waxa uu ku eedeeyay in horumarka Soomaaliland ay hortaanagn tahay mar walba ,balse taasi aysan dhag iyo jalaq usiin doonin Soomaaliland.
Baarlamaanka dalka Soomalaiya ayaa horay usheegay in heshiiska dekeda Berbera ee Shirkada DP World uu yahay mid sharci daro ah.
Kaluumaysatada gobolka Garda Fuu oo ka walaacsan Duufaanta ku soo wajahan xeebaha Puntland ( dhegayso )